ILEX RAT, dzosera mudziyo wako pasina kurasikirwa neJailbreak (Cydia) | IPhone nhau
ILEX RAT, dzosera mudziyo wako pasina kurasikirwa neJailbreak (Cydia)
IPad nhau | | Cydia, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Mazuva mashoma apfuura takakuratidza kuti beta ye SemiRestore, application inobvumidza dzosera mudziyo wako kuzvigadzirwa zvefekitori asi pasina kurasikirwa nejailbreak, kuchengeta Cydia yakaiswa, uye pasina kushandisa iTunes kana chero firmware. Iyi purogiramu haisati yavapo. Kutenda kune ako makomendi, ini ndawana imwe nzira yakapusa iri kuwanikwa izvozvi, uye maitiro ese anogona kuitwa kubva pachigadzirwa zvacho, zvichiita kuti zvive nyore. Iko kunyorera kunowanikwa muCydia, yemahara, uye inonzi iLEX RAT.
Chinhu chekutanga kuita ndeche wedzera chinyorwa "http://cydia.myrepospace.com/iLEXiNFO/" inova iyo iine iLEX RAT application yatinozoisa. Pamusoro peichi chishandiso, isu tichafanirwa kuisa MobileTerminal, iyo yatinayo mune yepamutemo BigBoss repo, yemahara zvachose. Kana tangoisa iwo maapplication maviri tinogona kuenderera nekudzoreredza.
Isu tinoparura MobileTerminal kubva ku icon ichaonekwa pane inotenderera. Kana iro dema dhivha raonekwa, tinonyora "rat" pasina makotesheni uye tinya Enter Enter. Iyo iLEX RAT menyu inozoonekwa pamwe nesarudzo dziripo. Kune dzimwe sarudzo asi iyo inotinakidza mune ino dzidziso nhamba 12. Tichaongorora zvakasara zvesarudzo mune imwe dzidziso., izvo zvakare zvinonakidza kwazvo. Isu tinonyora "12" pasina makotesheni uye tinya Enter zvakare.
Iye zvino tinogona kungomirira chete. Zvichienderana nedata rine mudziyo wako, maitiro acho anogona kutora yakawanda kana shoma nguva, asi sezvazvakaita neSemiRestore zviri nani iva nemoyo murefu uye uzive kuti zvinogona kutora maminetsi akati wandei. Paunenge wapedza, zvinotikumbira kuti titangezve chishandiso. Mushure mekutanga zvekare tichaona chishandiso "chitsva kunze kwebhokisi" asi nemusiyano uyo Cydia yakaiswa. Iyo yakapusa nzira yekugadzirisa zvikanganiso izvo zvinokonzeresa kusagadzikana kana kunonoka kwechigadzirwa chako.
Mamwe mashoko - Isu takaedza SemiRestore uye inoshanda. Dzosa mudziyo wako pasina kurasikirwa jailbreak
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » ILEX RAT, dzosera mudziyo wako pasina kurasikirwa neJailbreak (Cydia)
Mhoroi, ini handina kukwanisa kuita kudzoreredza neILEX RAT, kana iwe ukaona iyo icon, asi kana iwe ukaibaya, inongodzima ichienderera uye hapana chinoitika, ini handina kukwanisa kuita kudzoreredza nesemorestore futi. ndibatsireiwo
Zviuru zveakaundi zvinokanganiswa nekanganiso ye Instagram
Iyo Galaxy S4 ndiyo yakanakisa smartphone pamusika, maererano neConsumer Reports